Amaphiko amakhulu ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu yinto yomhlaba wonke esithinta sonke, yize kungenjalo ngendlela efanayo. E-Australia kunenyoni esikhumbuza impela ngopholi ogama lakhe ngokwesayensi UBarnardius zonarius que uhlangabezane nokunwetshwa kwamaphiko ayo phakathi kwamasentimitha ama-4 kuye kwayi-5 eminyakeni yamuva. Kubangelwa yini?
Konke kubonakala kukhombisa ukuthi ukwanda kwamazinga okushisa, kanye nemikhuba yokugawulwa kwamahlathi okwenzeka eNtshonalanga Australia ngeminyaka yama-1970, kube nomthelela ekwandisweni kwamaphiko.
Ososayensi base-University of Notre Dame eSydney bahlole izibonelo ezimbalwa ezivela eWestern Australia Museum, eneqoqo lezinyoni ezisukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX kanye nezinhlobo eziphilayo. Ngakho-ke, bakubona lokho izimpiko zazinde phakathi kwamasentimitha ama-4 kuya kwangu-5 eminyakeni engama-45 edlule, ngaleso sikhathi izinga lokushisa lenyuke phakathi kuka-0,1 no-0,2 degrees esifundeni lapho kuhlala khona lezi zinyoni ezinhle.
Lokhu kwehluka kuncane, kepha umthelela emvelweni ubalulekile njengoba kufakazelwa ucwaningo UBarnardius zonarius, eyaziwa kangcono njengama-parakeet kaBarnard. Futhi yilokho izinyoni zezulu ezifudumele ngokuvamile zinemilenze emide kunalezo ezihlala ezindaweni ezipholile.
UDylan Korczynskyj, ongomunye wososayensi ababambe iqhaza ocwaningweni, wathi "njengoba izinga lokushisa kwesimo sezulu lenyuka, ukwanda kobude bezimpiko kungasiza lezi zinyoni ukuzikhulula ekushiseni ngokweqile futhi zivumelane kangcono nemvelo yazo".
E-Australia, izwekazi elomile kunazo zonke emhlabeni, izinga lokushisa lenyuke cishe nge-1 degree kusukela ngo-1910, njengoba kukhonjisiwe ku umbiko weSimo Sezulu sonyaka wezi-2016 esenziwa yiHhovisi Lezemvelo yezwe. Manje ikusasa liphetheni izinyoni zase-Australia?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izimpiko ezinkulu ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu